पाकिस्तानका चर्चित सेलिब्रिटीः जसले आफ्ना दाजु–बहिनीलाई विवाह गरे | Radio Makalu 102.1 MHz Websoft University
नजिकको सम्बन्ध वा कजन (काकाको, मामाको, फूपूको छोराछोरी) सँग गरिने विवाह स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले राम्रो मानिँदैन । अनुसन्धानका अनुसार यसले जेनेटिक रोगका साथै स्वास्थ्यमा पनि निकै खतरा निम्त्याउँछ । अमेरिकामा ५२ मध्ये करिब २४ स्टेट्समा कजनसँगको विवाहमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । यता, पाकिस्तानको ट्रिब्यून एक्सप्रेस पत्रिका अनुसार पाकिस्तानका युवायुवतीले अब कजनसँगको विवाहमा विरोध गर्न थालेका छन् ।
यति हुँदा हुँदै पनि साधारण मानिसका साथै ठूला सेलिब्रिटीले पनि आफ्नो कजनसँग विवाह गरेका छन् ।
कजनसँग किन गर्छन् विवाह ?
विरोधका बिच पाकिस्तानमा कजन म्यारिज जारी छ । तर शहरी इलाकामा भने तीव्र परिवर्तन भइरहेको छ ।
– थुप्रै पाकिस्तानी परिवारको मान्यता अनुसार बच्चाको विवाहका लागि यताउता धाउनुभन्दा आफ्नो सन्तानका लागि कजनसँगको विवाह सबैभन्दा राम्रो हो ।
– यस्तै धेरै मानिसहरु आफ्नो सन्तानबाहिर विवाह गर्दा मानिसहरु रिसाउने हो कि भन्ने डरले यसो गर्ने गर्दछन् ।
कति पाकिस्तानीले कजनसँग विवाह गर्छन् ?
लाहोर युनिभर्सिटीका डिपार्टमेन्ट अफ ह्यूमन जेनेटिक्सका डा. मुहम्मद असलमखानले सन् २०१४ को आँकडा जारी गरेका थिए ।
– अनुसन्धानको आधारमा पाकिस्तानमा ८२.५ प्रतिशत अभिभावक तेस्रो पीढिसम्म रगतको नाता हुन्छ भन्ने मान्यता राख्छन् ।
– ६.८ प्रतिशत मानिसहरु कजन हुने गर्दछन् । ६.३ मानिसहरु छरिएका परिवार र थरबाट आउँछन् ।
– यस्तै, ४.४ प्रतिशत जोडीले मात्र कजनसँग विवाह गर्न अस्विकार गरेका छन् ।
– यो अनुसन्धान ९ हजार ५ सय ३ परिवारको गरिएको अनुसन्धानपछि जारी गरियो ।
यी सेलिब्रिटीले कजनसँग गरे विवाहः
शाहिद आफरिदी, क्रिकेटरः
क्रिकेटर शाहिद आफरिदीले आफ्नो काकाको छोरी नादियासँग विवाह गरे । यो जोडीका चार छोरी छन् ।
टेलिभिजन अभिनेता बाबर खानः
पाकिस्तानी टेलिभिजन अभिनेता बाबर खानकी पहिलो श्रीमतीको मृत्यु एक दुर्घटनामा भएपछि उनले सन् २०१५ मा ९ कक्षामा पढ्ने आफ्नी कजन बिस्मा खानसँग विवाह गरेका थिए । श्रीमतीको विवाह भएको १ वर्ष नबित्दै ९ कक्षामा पढ्ने बहिनी पर्नेसँग विवाह गरेको भनी उनको चौतफी विरोधसमेत भएको थियो ।
रेहम खान, टेलिभिजन प्रस्तोता
सन् २०१५ मा रेहम खानले क्रिकेटर इमरान खानसँग विवाह र सम्बन्धविच्छेद गरेका कारण चर्चामा थिइन् । इमरानसँग विवाह गर्नु पहिले उनी आफ्ना कजन एजाज उल रहमानकी श्रीमती थिइन् ।
शाइस्ता लोधी, टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता
प्रस्तोता शाइस्ता लोधी पाकिस्तानको एक बिहानी कार्यक्रम प्रस्तोता हुन् । उनले पहिलो श्रीमान् वाहिदीसँग सन् २०१२ मा सम्बन्ध विच्छेद गरेकी थिइन् । सन् २०१५ मा उनले आफ्ना कजन र व्यापारी अदनानसँग विवाह गरेका थिए ।
नुसरत फतेह अली खानः
पाकिस्तानका चर्चित कव्वाह गायत उस्ताद नुसरत फतेह अली खाले आफ्ना काकाकी छोरीसँग विवाह गरेका थिए ।
पाकिस्तानी क्रिकेटर सइद अनवरले कजन बहिनी लुबनासँग विवाह गरेका छन् ।
सनम मारवी पाकिस्तानकी लोक गायिका हुन् । उनका श्रीमान् हम्मिद पनि उनका काकाका छोरा हुन् ।-एजेन्सी